Ahoana ny fomba hamoronana ny fonony aloha sy aoriana amin'ny bokinao toy ny Pro | Famoronana an-tserasera
Mety ho mpamorona iray ianao izay vao notendrena hamorona ny fonony sy fonony ao ambadiky ny boky. Na angamba ianao mpanoratra mijery ny fomba anaovanao ny tenanao mba hahafahanao mamoaka ny bokinao samirery. Na izany aza, afaka manampy anao izahay!
Na ny fonony aloha sy ny ao ambadiky ny boky dia toy ny fiheverana voalohany ananan'ny olona iray. Amin'ity tranga ity, ny tianao dia ny misarika ny sain'ny mpamaky mba hampirisihana azy ireo hividy ny bokinao. Ka ahoana no tokony hataonao?
1 Inona ny fonon'ny boky
2 Inona ny fonony aoriana amin'ny boky
3 Maninona no zava-dehibe tokoa ny famoronana ny rakotra boky tonga lafatra sy ny fonony miverina
4 Ahoana ny fomba famoronana ny fonony aloha sy aoriana amin'ny boky
4.1 Inona no tokony hotadidinao ao anaty fonony?
4.2 Inona no tokony hotadidinao ao amin'ny fonon'ny boky ao ambadika?
5 Extra: aza adino ny hazondamosina amin'ny fonony
Inona ny fonon'ny boky
Alao sary an-tsaina hoe mandeha eny amin'ny arabe ianao ary mijery eo am-baravarankelin'ny fivarotam-boky. Ao anatin'io dia misy ny safidin'ireo boky napetraka ary ny sasany amin'izy ireo dia mahasarika ny sainao. Ny sary misy ny lohateny, mpanoratra ary kely fotsiny no misy? Ka izay.
La Ny fonon'ny boky dia ny ampahany hita taratra amin'ny lohatenin'ny boky, ny anaran'ny mpanoratra ary ny mpanonta namokatra azy. Fa ny tena misy akony lehibe indrindra dia ny sary, sary na sary manaingo ny boky, mifandraika hatrany amin'ny tantara izay ao anatiny.
Ireto manaraka ireto dia miavaka amin'ny manaraka:
Ampidiro ny fampahalalana ilaina amin'ny katalaogin'ny boky (amin'ny lohateny, mpanoratra na mpanonta).
Asehoy ny sary mandeha mifanaraka amin'ny tantara notantaraina.
Aza be loatra, satria hamorona ny vokany mifanohitra amin'izany ianao, izay holavin'ny mpamaky noho ny mahavoky loatra (na noho ny fisehoana korontana sy fiheverana fa hitovy ilay boky).
Inona ny fonony aoriana amin'ny boky
Ahoana izao ny amin'ny fonony aoriana? Ity no ampahany "miverina" amin'ireo boky, ary io no toerana ahafahanao manohy ampahany amin'ny fonony na misafidy loko miloko sy miavaka.
Anisan'ireo fampahalalana napetraka eo amin'ny fonony aoriana amin'ny boky ny tombo-kase ISBN (tombo-kase izay maneho ny laharana fisoratana anarana ISBN ananan'ilay boky). Tsy maintsy atao io fitomboka io raha te-hivarotra ilay boky any amin'ny fivarotam-boky ianao, ary fiantohana ho an'ny mpanoratra ihany koa izany satria voasoratra ara-panjakana ny asa ary misy antontan-taratasy iray raha sanatria misy manandrana mampita ilay boky ho azy.
Iray amin'ireo angona ao anatiny koa ny a synopsis na famintinana ny tantara. Amin'ity tranga ity, toy ny fonony ny fomba fiasa hita maso voalohany ny tantara anatiny, raha ny fonony kosa dia fomba fiasa ny fomba fiasa, satria famintinana kely napetraka izay mitady hisarika ny saina dia ampifandraiso ny mpamaky.
Satria tsy dia lehibe loatra ny habaka eo amin'ny fonony aoriana, dia miezaha tsy hanao ny lahatsoratra handrakotra ny habaka manontolo, na koa kely loatra ka mora vakiana. Ho fanampin'izany, antsipiriany maro no tsy tokony omena satria tsy ny mpamaky, mamaky io ampahany io, no mahalala izay hitranga amin'ilay tantara.
Ny mpanoratra sasany koa dia mametraka sary sy / na tantaram-piainana fohy amin'ny fonony aoriana, saingy azo avela izany ary tsy maro no mampiasa azy.
Maninona no zava-dehibe tokoa ny famoronana ny rakotra boky tonga lafatra sy ny fonony miverina
Efa fantatrao hoe inona ilay fonony ary inona no fonony aoriana. Fa, Fa maninona no tena zava-dehibe amin'ireto raha ny tena tantara no ao anatiny? Eny, ny marina dia misy antony maro:
Satria ny mpamaky tsy mahalala izay karazana tantara ao anatiny ary entin'ny zavatra manintona azy amin'ny fahitana. Noho izany ny maha-zava-dehibe ny fandrakofam-pitiavana sy ny fisamborana ny mpamaky, na dia tsy fantany aza hoe inona ilay boky.
Satria ny fonony aoriana no afaka mamarana ilay famakiana boky. Alao an-tsaina hoe tianao ny boky iray noho ny fonony. Fa rehefa avadibadikao io dia tsy milaza na inona na inona aminao ny fonony aoriana. Banga ary tena tsy fantatrao izay ho anton'ilay boky. Hividy azy ve ianao? Ny tena azo atao dia ny tsia. Alao an-tsaina izao fa io fonony aoriana io dia manana synopsis izay avelany tsy fantatrao ka mahatonga anao te hahafantatra izay hitranga.
Ny fonony dia lasa taratasy fisoratana amin'ny boky, ary koa mpanoratra. Imbetsaka isika no mamantatra ireo mpanoratra amin'ny fonony. Ary arakaraka ny mahavariana sy ny fahatsiarovanao no ilaoanao, ny fahombiazan'ny fanekena anao bebe kokoa.
Ahoana ny fomba famoronana ny fonony aloha sy aoriana amin'ny boky
Raha manana boky ianao, na nomena andraikitra hamorona rakotra boky sy fonony aoriana, dia tokony ho fantatrao fa mila programa fanovana sary ianao hanatanterahana azy. Iray amin'ireo tsara indrindra sy feno indrindra ny Photoshop, fa raha ny tena izy dia azonao ampiasaina ilay tianao indrindra ary mamela anao hanova sary, hanova azy ireo ary hanampy lahatsoratra ao aminy.
Inona no tokony hotadidinao ao anaty fonony?
Rehefa mamorona rakotra boky ianao dia tsy maintsy manana:
Ny sary. Mety ho tonga "base" io, izay midika fa mila manadio azy ianao, mampifantoka azy tsara, manova ny soatoavina mifanohitra, hazavana sns. ny sary ary ataovy mahasarika ny maso izany.
Ny lahatsoratra. Amin'ity tranga ity dia mila ny lohatenin'ny asa, mpanoratra ary mpanonta ianao. Ny sasany koa dia mety mampiditra andian-teny manan-danja avy amin'ny boky, na ny fiantsoana raha toa ka saga na trilogy.
Mba hamoriana azy dia tsy maintsy miasa amin'ny sary aloha ianao ary avy eo manampy ny lahatsoratra. Ny ampahany tsirairay dia tokony ho sosona hafa, amin'izay, raha mila manova zavatra ianao dia ho mora kokoa izany.
Ataovy ao an-tsaina fa ny fonony dia hanana fandrefesana manokana arakaraka ny haben'ny boky (15x21cm ny mahazatra). Ho fanampin'izay, toerana iray tsy maintsy avela manodidina ny sisiny mba hialana amin'izany, rehefa manonta ny boky, ny guillotine dia manapaka ampahany manan-danja toy ny lohateny na ny anaran'ny mpanoratra.
Inona no tokony hotadidinao ao amin'ny fonon'ny boky ao ambadika?
Raha ny fonony aoriana, ity Tokony hifanaraka amin'ny fonony izy io. Ohatra, raha misy fototra mena ny fonony eo aloha, dia mety tsy ho tsara tarehy ny mametraka ny fonony aoriana amin'ny manga, na maitso.
Eto dia tsy mila ilay lahatsoratra hapetraka fotsiny ianao, izay tsy maintsy afovoany ary mamela toerana ampy ho an'ny kaody bar miaraka amin'ny ISBN.
Extra: aza adino ny hazondamosina amin'ny fonony
Tsy sarotra ny mamorona ny fonony aloha sy aoriana. Saingy tsy maintsy tadidinao fa ny boky rehetra dia manana hazondamosina, izany hoe, faritra midadasika izay ampidirina ao daholo ny pejy, ho fanampin'ny fonony sy fonony aoriana. Ity dia tsy maintsy volavola ihany koa hamenoana azy io ary hampiasaina. Miankina amin'ny isan'ny pejy, ny hatevin'ny hazondamosina dia ho bebe kokoa na kely.
Raha sambany izy ity, mamporisika anao izahay handefa modely fanakonana, satria ho mora kokoa ny manao izany (ohatra, Amazon dia manana modely mifanaraka amin'ny isan'ireo pejy sy ny lokony).
Sahy manao fonony aloha sy aoriana ianao? Manana fisalasalana ve ianao? Ampahafantaro anay dia hanampy anao izahay!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Ahoana no fomba hamoronana ny fonony aloha sy aoriana amin'ny bokinao